तपाईको ब्रान्डको लागि Pinterest ग्राफिक्स सिर्जना गर्नुहोस् जुन बाहिर खडा हुन्छ क्रिएटिव अनलाइन
सुसाना डो कार्मो | | ग्राफिक डिजाइन
आज हामीसँग इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो दृश्य उपकरणहरू छन् Pinterest। हामी सोशल नेटवर्क ब्राउजिंग तस्बिरहरू तस्विरहरूको खोजीमा बिताउँदछौं जुन हामीलाई प्रेरणा दिन्छ वा जुन परियोजनाको सन्दर्भको रूपमा सेवा गर्दछ। तर एउटा कुरा ग्राफिक डिजाइनरहरू, ब्लगरहरू, र मार्केटरहरू जान्दछन् Pinterest एक बोर्ड भन्दा धेरै छ जहाँ तपाईं आफ्नो मनपर्ने छविहरू बचत गर्नुहुन्छ।
अनलाइन स्टोरहरू, ब्लगहरू, ब्रान्ड वेबसाइटहरू र इन्टरनेट मा अन्य पोर्टल, छ ग्राहक वा पाठक यातायातको उच्च प्रविष्टि Pinterest मार्फत। त्यो एक सामाजिक नेटवर्क भन्दा धेरै छ, यो एक खोज इन्जिन छ कि ग्राहकहरुलाई व्यवसायको साथ जोड्दछ।
यो काम गर्ने तरिका धेरै सरल छ: छवि वा पिन अपलोड गर्नुहोस् जुन बदले हो तपाइँको वेबसाइट मा एक लिंक द्वारा जोडिएको। यो परिचित लाग्दछ? पक्कै एक पटक भन्दा बढी तपाईं एक यात्रा लेख, एक नुस्खा वा पिन मार्फत स्वयं-मद्दत सल्लाह पढेर समाप्त गर्नुभयो।
किनकि पिन्टेरेस्टमा खोज एकदम छिटो छ, सेकेन्डमा तपाईंको पिन उपेक्षा गर्न सकिन्छ यदि यो तुरून्त ध्यान आकर्षित गर्दैन भने। यो एक सुन्दर छवि को लागी पर्याप्त छैन किनभने प्रतिस्पर्धा धेरै महान छ। तसर्थ, यदि तपाईं यो नेटवर्क मार्फत आफ्नो ब्लग वा तपाईंको ब्रान्ड प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले गर्नुपर्दछ ग्राफिक्स बनाउनुहोस्, तपाईंले ध्यानमा राख्नु भएको केहि पक्षहरू तपाईंले लिनु पर्दछ जसले तपाईंलाई बाहिर खडा गर्न मद्दत गर्दछ।
3 पाठ र फन्टहरू
5 टेम्प्लेटहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यो मुख्य पक्ष हो जुन तपाईंले सम्मान गर्नुपर्दछ: तपाईंको ग्राफिक ठूलो र ठाडो हुनुपर्छ। पिन्टेरेस्टमा, ठाडो छविहरूले अधिक ठाउँ लिन्छन् किनकि तिनीहरू स्तम्भहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् र राम्रो प्रदर्शन गर्दछन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई वर्ग वा तेर्सो बनाउनुभयो भने तिनीहरू एकदम सानो देखिन्छन् र जनताको ध्यान खिच्ने छैनन्।
आकार हुनु पर्छ २:। अनुपात, उही सामाजिक नेटवर्कको दिशानिर्देशहरू द्वारा सिफारिस गरिएको। न्यूनतम आकार जुनमा तपाइँले तपाइँको पिन डिजाइन गर्नुपर्दछ 600०० x p ०० px हो, र तपाइँ समान अनुपात पछि यसलाई ठूलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, तपाईले ध्यानमा राख्नु पर्छ कि यदि यो उचाईमा १२०० px भन्दा बढि छ भने, यो फिडमा पूर्ण रूपमा नदेखिन सक्छ।
हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाई एक माप को उपयोग गर्नुहोस् X०० x १२०० px
यद्यपि धेरै ग्राफिक्सको मात्र टेक्स्ट हुन सक्छ, यो सँधै हुनेछ अधिक आकर्षक पिन जसमा छवि समावेश छ राम्रो गुण को। तपाईं यसलाई पृष्ठभूमिमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, डिजाइनको आधा हिस्सा ओगटेको छ वा तपाईंको लागि उत्तम रूपमा काम गर्ने तरिकामा। सधैं खोज्नुहोस् तपाईंको चार्टको शीर्षकसँग सम्बन्धित छ र त्यो तपाईंले प्रमोट गर्ने ब्रान्ड वा उत्पादन अनुसार छ।
पिनटेरेस्ट ग्राफिकको लागि पृष्ठभूमि छवि। आइसक्रीम पपसिकल ब्रान्ड।
पाठ र फन्टहरू
यो तपाईंले विचार गर्नु पर्ने अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। को ठूलो, बोल्ड फन्टहरूमा सजीलो पढ्न पाठ कुनै व्यक्तिलाई पिनमा क्लिक गर्ने निर्णय गर्नको लागि यो मुख्य अंक हो।
El पाठ सटीक हुनुपर्दछ, र यो उपयुक्त छ कि यो लामो छैन। दिनु पर्ने हुन्छ स्पष्ट रूपमा ग्राफ को बारे मा बुझ्न, यस तरीकाले तपाईंसँग धेरै नयाँ फलोअरहरू हुनेछन् जुन तपाईंको वेबसाइटमा प्रवेश गर्दछ।
हामी सुझाव दिन्छौं दुई वा तीन फन्टहरू प्रयोग गर्नुहोस् अधिकतम, र संयोजनहरूसँग खेल्नुहोस्: तपाईं बोल्ड सेन्स सेरिफको साथ कलग्राफी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा सेलिग्राफिको साथ सेरिफ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सबै तपाइँको ग्राफिक पहिचान को शैली मा निर्भर गर्दछ।
र पक्कै पनि, त्यो तपाईं हुनुहुन्छ ग्राफिकको राम्रो कन्ट्रास्ट छ पृष्ठभूमि, छवि, र the्ग र टाइपोग्राफी बीचमा, ताकि कुनै पनि हराउँदैन।
व्यक्तिहरू उनीहरूलाई पहिले नै थाहा भएका ब्रांडहरूसँग अधिक सम्पर्क राख्छन्। त्यसो भए, तपाईले डिजाइन गर्नु भएको ग्राफिक्सले तपाईको ग्राफिक पहिचान अनुसरण गर्नुपर्दछ। स्थिरता र सजिलो दृश्य सहयोगको लागि तपाईंको ब्रान्डको मुख्य रंग र फन्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्। जनताले तपाईंलाई जति चिन्छ, अधिक तिनीहरूले तपाईं repin बनाउन हुनेछ र अधिक तपाइँको वेबसाइट मा प्रवेश गर्नेछ।
केहि स्पष्ट तर तपाईंले बिर्सनु हुँदैन तपाईंको लोगो, तपाईंको ब्रान्डको नाम वा तपाईंको वेबसाइटको डोमेन समावेश गर्नुहोस् सबै चार्टहरूमा तपाइँ बनाउनुहुन्छ।
आइसक्रिम पपसिल ब्रान्ड मेलोसिटसका लागि पिन्टरेस्ट ग्राफिक
टेम्प्लेटहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको ग्राफिक बनाउन माथिका सबै पक्षहरु लाई लागू गर्नुहुन्छ भने, तपाई सजीलै विकास गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आफ्नै ब्रान्डको टेम्प्लेट डिजाइन। पहिले नै सिर्जना गरिएको टेम्पलेटको साथ, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको पाठ परिवर्तन गर्नु र र withहरूसँग खेल्नु हो।
जब व्यक्तिहरू तपाईंको ग्राफिक्स र उही टेम्प्लेट हेर्न बानी हुन्छन्, तपाईं आफ्नो ब्रान्डको मान्यता बढाउनुहुनेछ र राम्रो स्थिति पाउनुहुनेछ।
त्यसोभए, अब तपाईंलाई थाहा छ, यदि तपाईं Pinterest मार्फत अनुयायीहरू र ग्राहकहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, ग्राफिक्स सिर्जना गर्न सुरू गर्नुहोस् जसले प्रभाव पार्छ!
समान टेम्पलेट मेलोसिटस आइसक्रीम पपसिल ब्रान्डको लागि अर्को Pinterest ग्राफिकमा लागू गरियो
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » तपाईको ब्रान्डको लागि पिन्टरेस्ट ग्राफिक्स सिर्जना गर्नुहोस् जुन बाहिर खडा छ
अन्तत: तपाइँको आईप्याडको लागि प्रोक्रेट गर्नको लागि पाठ उपकरण आउँछ